Hyundai County 2008 (#521356) ကို Mingaladon မြို့နယ်တွင်... | CarsDB
2017-06-05 09:10:50 +0630
2008 ခုနှစ် Model ဟွန်ဒိုင်းကောင်တီ စီးတီးဘတ်စ်အမျိုးအစား
၁၅ ယောက်စီး မီနီဘတ်စ်ဖြစ်ပါတယ်။
သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ၊
မြို့ တွင်း မြို့ ပြင် ခရီးတို လုပ်ငန်းများ ၊
ရုံးကြို ကျောင်းကြို လုပ်ငန်းများ
သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေမှာပါ ..
ခေါ်ဈေး သိန်း ၂၄၀ ဖြစ်ပြီးဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းနိုင်ကာ
လက်ငင်း (သို့ ) အရစ်ကျ ပေးဝယ်နိုင်ပါတယ်ရှင် ။
Name & Model - County City Bus (2008)
Type - Mini Bus (Short Body)
Engine Power - 3900 CC / 3.9 L
Fuel - Premium Diesel
Mileage - 80000
License - (BGO) -1L-23**
Price - 240 Lakhs ( Negotiate )
You can pay with cash or hire purchase.
No.542/6, No3Main Road,
Shwenatha Block , Mingaladon Tsp,Yangon.
KAP (Korea Auto Park)
09 780 130 841
09 250 224 162
09 799 522 281
Lot Number: #521356
SHWE Car Myanmar